Editon Blu-Ray an'ny mpamory 'House of Wax' dia nofenoina galeriana fampitahorana
Home Blu Rays Editon Blu-Ray an'ny mpamory 'House of Wax' dia nofenoina galeriana fampitahorana
Blu RaysVaovao Mahafaly Fialam-boly
by Trey Hilburn III Jona 7, 2021
Ny tolotra farany nataon'i Scream Factory amin'ny horohoro dia ilay mpikomy tamin'ny 2005 nampalahelo, tsy jerena, House of Wax. Miorina tanteraka ilay horonantsary ary tsara ny fahitana azy mandehandeha hitady mpijery vaovao. Ity dia fanomezana hafa avy amin'ny Dark Castle Entertainment ireo olona izay nitondra anay Sambo fanahy ary Tranon'i Hill Haunted Hill.
Ny sarimihetsika dia kintana miaraka amin'i Elisha Cuthbert, Chad Michael Murray, Brian Van Holt, Paris Hilton, Jared Padalecki, Jon Abrahamams ary Robert Ri'chard ary fahafinaretana lehibe tokoa tamin'ny namoahana azy tamin'ny sinema. Na izany aza, tamin'io fotoana io dia somary nisy lozabe slasher ary tsy nisy olona te hiseho, farafaharatsiny tsy ho an'ny besinimaro.
Ny synopsis ho an'ny House of Wax mandeha toy izao:
Rehefa simba ny fiaran'izy ireo amin'ny dia mandehandeha, dia naman'ny oniversite enina no navarina an-tsokosoko tao an-tanàn-dehibe mahatsiravina. Ny fahalianana dia manararaotra azy ireo rehefa manintona azy ireo ny House of Wax makabe. Vetivety dia hitan'izy ireo fa tsy araka ny fahitana azy ny tanàna, ary tsy maintsy mitady ny lalan-kalehany izy ireo alohan'ny hahatongavan'ny olona ho mpamono olona.
The House of Wax miavaka toy izao:
· Fizahana 2K Vaovao an'ny interpositive
· NEW Die, My Darling - resadresaka nifanaovana tamin'ny mpilalao sarimihetsika Paris Hilton
· Vaovao ny Tale of Blake sy Paige - resadresaka niarahana tamin'ny mpilalao sarimihetsika Robert Ri'chard
· New Organ Grinder - tafatafa niarahana tamin'ny mpamoron-kira John Ottman
· Vaovao amiko, velona sy miaina izy ireo - resadresaka nifanaovana tamin'i Jason Baird, mpanakanto momba ny makiazy
· Fanehoan-kevitry ny horonan-tsary B-Roll sy Bloopers
· Avy amin'ny Toerana: Mampiseho ny tranon'ny Wax i Joel Silver
· Wax On: Ny volavolan-tranon'i Wax
· Ny trano namboarina tamin'ny savaivay: ny vokany hita maso amin'ny tranon'ny tasy
· Fanokafana hafa: novonoina i Jennifer
· Resadresaka taloha miaraka amin'ireo mpilalao sy ekipa avy amin'ny kitapom-baovao elektronika
· Featurette taloha
· Tranofiara teatra
House of Wax fanontana fanangonana tonga tamin'ny 13 Jolay ary tsy afaka miandry handinika ireo lafin-javatra mahafinaritra ireo izahay. Ianao dia afaka mitodiha aty haka ny kopiananao.
Horonantsary fanadihadiana maty ratsy, Arahaba ny Deadites ho avy tsy ho ela! Zahao eto ny tranofiara.
House of WaxScream FactoryHiantsoantso Factory
Resadresaka: Julian Richings amin'ny 'Spare Parts', 'Anything for Jackson', ary ny fahalemen'ny fihetsika
Rob Zombie dia nanamafy ny horonantsariny manaraka dia hampifanaraka ny Sitcom amin'ny fahitalavitra 'The Munsters'